TogaHerer: SOO DHAWAYNTII ABWAAN MAXAMED JAAMAC WARSAME (KAYD) IYO LONDON
SOO DHAWAYNTII ABWAAN MAXAMED JAAMAC WARSAME (KAYD) IYO LONDON
Waxa xalayto ka dhacday galbeedka magaalada London xaflad aad losoo agaasimay oo lagusoo dhaweynaayey Abwaanka weyn ee caanka ah Maxamed Jamac Warsama (Kayd) oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaro reer Somaliland oo degan magalada London .
Waxa soo dhaweyntii iyo cashadii ka dib hadalki la wareegay Abwaan Kayd oo usoo jeediyey dhalinyaradii casho sharaftan soo qaban aabiyey mahadnaq gaar ah.
Intaas ka dib waxa uu abwaan Maxamed Jamac Warsama uu warbixin kooban kazoo jeediyey xalada Somaliland iyo safarkiisan uu halkan London kusoo gaadhay waxaanu sheegay in guud ahaan Somaliland ay horumar wanagsan oo la taabankaro ku talaabsatay loona bahan yahay waxqabad ay qurbaha dadka reer Somaliland ee degani ay ka sameeyaan dalkii hooyo.
Waxa kale oo uu madasha ka sheegay in waxbarashadu ay tahay lafdhabarta qofka oo loo bahan yahay in lagu dedaalo inagoo ka war hayna in uu Maxmaed Jamac Warsame oo wax ka dhigo jamacada magalada Hargaisa oo uu iyana ka sheekeeyey.
Waxaynu la wada soconaa in dhawaan uun uu soo gadhay Abwaan Kayd magalada London isagoo ku yimid booqasho gaaban oo uu kaga qabgalayo bandhigfaneedka beryahanba ka soconaayey bariga magaladan London.
Hamse Axmed Salaan
Posted by togaherer at 05:49